युरोपका हाई-टेक चिहानहरूमा मर्नेहरूलाई यस्ता सुविधा ! – Everest Dainik – News from Nepal
युरोपका हाई-टेक चिहानहरूमा मर्नेहरूलाई यस्ता सुविधा !
कुनै सामान किन्दा, या समाचार पत्रमा कुनै समाचार पढ्दा क्युआर कोड त देख्नु भएकै होला । सेतो पृष्ठभूमिमा कालो रङ्गमा बनेका आकृतिहरूलाई क्युआर कोड भनिन्छ, यसमा कुनै पनि सामग्रीको डिजिटल जानकारी रखिएको हुन्छ जसलाई मोबाइल या क्यामेरा जस्ता इमेजिङ डिभाइसको सहायताले पढ्न सकिन्छ ।
व्यापारिक उत्पाद या यस्तै अन्य सामग्रीमा क्युआर कोड राखिनु त सामान्य कुरा नै हो यसले उपभोक्तालाई सही वेबसाइटसम्म पुग्न मद्दत गर्दछ। यस्तो कोड अक्सर डिजिटल विज्ञापनहरूमा देखिने गर्दछ तर कतिपय पश्चिमी देशहरूमा भने यस्ता कोदहरू समाधि र चिहानहरूमा समेत देखा पर्न थालेका छन्।
इसाई धर्मावलम्बीहरूले चिहानमा एउटा ढुङ्गामा त्यहाँ समाधिस्थ व्यक्तिबारे लेखेर राख्ने गर्दछन । सामान्यतया यस्तो जानकारीमा उक्त व्यक्तिको जन्ममिति र मृत्यु भएको मिति पर्दछ।
तर अब मर्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण डिजिटल जानकारी श्मशानघाटको वेबसाइटमा राखिन थालेको छ र त्यसको सट्टा चिहाननेर एउटा क्युआर कोड राखिने गरेको छ। उक्त कोड स्क्यान गर्दा मृत व्यक्तिको जानकारी भएको पेज खुल्ने गर्दछ। क्युआर कोड को माध्यमले उक्त व्यक्तिको बारे विस्तृत जानकारी,उसका तस्बिर तथा भिडियोका साथै निजको अन्तिम संस्कारको बेला जारी गरिएको शान्ति संदेश समेत पढ्न सकिन्छ ।
यस्तै एउटा प्रयोगको तयारी जर्मनीमा समेत भैरहेको छ। त्यहाँको एउटा श्म्शानघाटले प्रत्येक चिहानमा क्युआर कोड राख्न सुरु गरेको छ। जसमा मृत व्यक्तको जीवन र उपलब्धिका बर्रे विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउने वेबसाइटको लिङ्क राखिएको हुनेछ।
तर जर्मनीको एसोसिएसन अफ जर्मन सेमिट्री एडमिनिस्ट्रेटर्सका मिडिया संयोजक अल्ब्रेस्ट भन्छन्, “हामी यस कुरामा अझै निकै पछाडी छौं। क्युआर कोड मात्र उपलब्ध हुनु पर्याप्त होइन। यसका लागि एउटा राम्रो वेबसाइट समेत आवश्यक पर्दछ जसमा निकै सीप र समय चाहिन्छ। आखिर मृत व्यक्तिका आफन्तहरूले त्यो पढ्दा उनीहरूलाई यसप्रति अपनत्वको अनुभूति होस्। ”
मृत व्यक्तिको गोपनीयताको प्रश्न
राइन-माइन विश्वविद्यालयका कानून विषयका प्राध्यापक गेर्ड म्यार्के भन्छन्, “व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा यस मामिलामा धेरै ठुलो मुद्दा हो। केही मसानघाटहरूका प्रबन्धकहरूका अनुसार क्युआर कोडले डाटा सुरक्षाका आवश्यक दिशा निर्देशहरू हनन हुन सक्छन् ।” म्यार्के यस मामिलामा एउटा रोचक प्रश्न मृत व्यक्तिको गोपनीयाताबरे पनि उठाउँछन्। उनी भन्छन्, “मरेपछि पनि व्यक्तिका नीजी अधिकारहरू रहिराख्छन्, चाहे ती कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहोउन ।
आयो मसानघाटको एप
जर्मनीका श्मशानघाट हरू देखि अहिले पनि क्युआर कोड टाढा छ। यसमा प्रविधिको चुनौती त छ नै अर्को चुनौती भनेको मर्ने व्यक्तिको गोपनीयता बारे पनि हो। तर यसैबीच यहाँ एउटा एप साह्रै लोकप्रिय हुँदै गैरहेको छ जसको नाम हो- ‘व्हेयर दे रेस्ट’ अर्थात ‘जहाँ उनीहरू विश्राम गर्छन्। ‘ यसलाई जर्मनीको बर्लिन-ब्राण्डनबुर्ग राज्यको ‘फाउन्डेसन अफ हिस्टोरिक ग्रेभयार्ड’ले सुरु गरेको हो।
यस एपले प्रयोगकर्तालाई सेलिब्रेटीहरूको चिहानबारे जानकारी दिने र त्यहाँसम्मको बाटो समेत बताउने गर्दछ। यस एपले जर्मनीका ३२ शहरका करीब एक हजार २ सय समाधिहरूको साथै ४५ वटा श्मशानघाट बारे जानकारी उपलब्ध गराउनुका साथै त्यहाँ समाधिस्थ व्यक्तिहरूको जीवनको बारेमा जानकारी समेत उपलब्ध गराउँछ।
शान्ति भङ्ग हुने चिन्ता !
सामान्यतया श्मशानलाई शान्त स्थल मानिन्छ। तर यस्तो कार्यले यस्ता ठाउँहरूको शान्ति भङ्ग हुने चासो समेत धेरैमा रहेको छ। हात हातमा मोबाइल फोनका साथै अन्य डिभाइस बोकेर आउने व्यक्तिहरूले श्म्शान्को शान्ति भङ्ग गर्ने भन्दै अल्ब्रेस्ट भन्छन्, “यी ठाउँहरूको संस्कृतिक महत्व छ र यो संस्कृति शान्तिको हो। यो कुनै पनि बहानामा भङ्ग हुनुहुन्न। “
ट्याग्स: Cemetry with QR code, QR Code